Kedu ihe ma ọ bụrụ na ahịa gị na-arụ ọrụ? | Martech Zone
Dịka onye na-azụ ahịa ahịa, ana m arụ ọrụ na ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla m na-arụkọ ọrụ na-etinye ego karịa afọ a karịa nke ikpeazụ na ịre ahịa ịntanetị, gụnyere mgbasa ozi mmekọrịta.
O di nwute na otutu n'ime ulo oru ndi a, ahia intaneti ha amalitela oru ha na enweta oku na ozi ịntanetị site na ndi na-azuta ahia ndi choro ma soro ha na intaneti. Mana ha na-ahụta nsogbu na-eweta nsogbu, ahịa nwere ike ịmepụta ndu mana ndị otu ahịa na-enwe nsogbu karịa ka ha na-emechi.
Atụmanya ịntanetị abụghị ndị ị na-ere na 3 afọ gara aga. Ndị ahụ sitere na 3 afọ gara aga maara nke ọma gbasara gị na ha amachaghị ihe ị rere ma ọ bụ otu i si ree ya. Ha amaghi ihe ị mere ziri ezi ma ọ bụ echiche ọ bụla banyere ihe ị ga-eme nke ọma. N'ezie, afọ 3 gara aga mgbe ị jụrụ ajụjụ, ọtụtụ arịrịọ sitere na atụmanya bụ 'gwa m ihe ị na-eme yana otu ị si eme ya.? Atụmanya nke taa achọghị ịma, ihe ị na-eme yana otu ị si eme ya. Nke ahụ na - akpata njikọ siri ike n'etiti ndị na - azụ ahịa na ndị na - ere ere ugbu a.
Atụmanya nke taa emegharịala gị, gaa na facebook peeji gị, soro gị na twitter wee gụọ nyocha banyere gị na yelp. Ha maara ihe ị na-eme, otu ị si eme ya na nkọwapụta niile dị njọ nke mmejọ ị meere n'afọ gara aga. Ha nwere ihe mere ha ga-eji kpọtụrụ gị, ọ bụghịkwa iji broshuọ gụọrọ ha.
Ọhụụ ọhụrụ ahụ achọghị ịmụ banyere gị-site n'aka gị. Ha ma ọtụtụ n’ime ihe ahụ tupu iru gị. Ọ bụrụ na ahịa gị na-ekepụta ụzọ na ndị ahịa gị enweghị ike imechi ha, nsogbu ahụ abụghị nke ndị ndu gị. Nsogbu a bụkarị usoro ahịa ị na-ahapụ ndị ahịa gị ka ha jiri.
Ọ bụrụ na ezubere usoro ịre ahịa gị ịgwa ndị mmadụ gbasara gị ọ nwere nsogbu na ịkwesịrị ịgbanwe.
Gbaa mbọ hụ na azụmahịa gị nwere usoro nhazi iji chọpụta ya mere olile-anya ahụ akpọtụrụla gị. Mgbe ị ghọtara mkpa nke atụmanya ahụ, mgbe ahụ ị na-etinye azụmaahịa gị n'ọnọdụ ịga nke ọma na ndị na-azụ ahịa taa.
Tags: ahia BluetoothWordPress